Warbaahinta & baraha bulshada oo qoraalo lagu dhaleecaynayo Ra’iisal Wasaare Khayre lagu soo fasaxay!! | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Warbaahinta & baraha bulshada oo qoraalo lagu dhaleecaynayo Ra’iisal Wasaare Khayre lagu...
Warbaahinta & baraha bulshada oo qoraalo lagu dhaleecaynayo Ra’iisal Wasaare Khayre lagu soo fasaxay!!
Waxaa maalmahan ka socda warbaahinta iyo baraha bulshada qoraallo hordhac ah oo lagu dhaleecaynayo Ra’iisalwasaare Khayre, haddaan idin yara taabto, waxaa shalay ku soo baxay, qoraal Qaar kamid ah Saxaafadda Soomaalida , oo looga dhigay cinwaan ” Magacaabidii Lama filaanka aheyd ee Kheyre” iyo qoraal kale oo aan barteyda facebook idinkula wadagaay oo la looga dhigay cinwaan “DHAGARQABE DHAKANAYA”.
Waxaan rabaa inaan is kooban uga warceliyo labada qodobba.
Maahmaah Soomaaliyeed ayaa tiraahda: “Buubaal biyo kashiisa ku jira ayuu ka dudaa” horta Kheyre waa kaalinta labaad ee hoggaanka dalka ninka haya, magacaabistiisana tartan uma geline waxaa tashi iyo is afgarad ku keenay Madaxweynaha dalka, haddii lagu fududaaday ama ay filan waay tahayna horaa loo sheegi lahaa.
Markii Madaxweynuhu magacaabay 329kii xubnood ee labada Golena waa ku raaceen cod weliba dhammeystiran oo aan dhantaaleyn.
Haddaba ninkay lama filaan ku ahayd, siday ugu noqotay iyo u qaadanwaagiisa isagaa naga yaqaan, waxaanse is weydiiyey, ma qof kale oo ka mudnaa ayuu meel ku ogaa? ma Khayre ayaan istaahilin inuu hoggaanka dalka qabto ama xaqba u lahayn? Mise isagaaba la jeclaa oo ay filanwaa ku noqotey in ninkuu la rabay la keenay?
Ninkaasi wuxuu iila ekaa nin la yiri ama la faray hebel waa musharax u taagan 2020ka ee sii xagxago, waxaase ka xumaatay halka uu ka abbaaray oo aan ahayn meel Khayre laga geli karo, waayo Khayre cid ka mudan ama kaga habboon qabashada xilka madaxnimo RW hadda iyo Madaxweynaha beriba ma jirto.
Wiilka yiri “waa Dhagarqabe dhakanaya”, qodobbadiisa ka sakoow, cinwaankiisa ayaa kuu sheegaya nacaybka iyo naxliga ku jira. Dhagarqabe: Dhagarqabe waxaan u aqaan ama Afkeenna uu ku yahay nin geystay godobbo weliba dil ah oo dhibaateeyey dad iyo duunyaba waa tii maahmaahdu ahayd “ Dhagarqabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqa”
Khayre meel uu dad ku laayay ama dhagar ku galay ama maxkamadi ku xukuntay ma eynaan arag, taasi waa gefka ugu horreeya ee weliba nin beegsiga ah ee uu geystay.
Qodobbadiisa haddaan is dul taagno:
1: Qodobka koowaad wuxuu ku eedeeyey Kheyre inuu yahay musharax 2020ka, yaa u diidaya goorma ayuuse hanka siyaaseed dhagar noqday?
2: Qodobka labaad wuxuu ku eedeyey inuu dhisay ciidamo caasimadda ammnigeeda ilaaliya oo u daacad ah, weliba tiro badan oo looga maarmi karo shisheeyaha, taasi ma ammaanbaa mise waa dhagar, hadduusan kuwo u daacad ah hawlgalin ma kuwo afgambiya oo aan daacad ahayn ayuu qoran lahaa?
3.Wuxuu ku eedeeyey inuu leeyahay taageerayaal iyo saaxiibo, kala duwan oo ka kooban, ganacsato, siyaasiyiin, indheergarad iyo xeelyahano(Khubaro) Nin walba oo raba hanashada hoggaanka dalka waa lagama maarmaan inuu yeesho dad la hawl gala, ileeyn far qura fool ma dhaqdee, xiniinyana waa kuwa lagula garab joogee ma inuu keligii Tanag garaacdo ayuu rabay?
Qodobkan wuxuu ku sheegay inuu Kheyre Madaxweynaha SUUQ XIREY, waa weerar toos ah oo uu madaxweynaha ku qaadayo, waana mid uu u muujinayo inuu yahay madaxweynuhu mid liita oo aan war iyo wacaal ka hayn waxa agtiisa iyo agagaarkiisa ka socda, sidoo kale wuxuu ammaan uusan ugu talogelin huwinayaa Khayre oo uu sheegay shaqadiis Ra’iisalwasaarenimo iyo tii Madaxweynahaba inuu isku darsaday.
Qodobka Shanaad ee uu ku sheegay in Kenya iyo Itoobiya Khayre ka wado qalalaase ka dhan ah dowladda, waa mid aan hubantidiisa ka sakoow lahayn cago badan, waana mid la xiriira arrintii ahayd inuusan Madaxweynuhu ahayn hoggaan og dalka siyaasadiisa arrimaha dibadda oo si toos ah u hoos tagta madaxweynaha, haddaba Kheyre haddii uu gudahana qabsaday dibadiina Qabsaday, Waa yaabe Madaxweynuhu isagaaba habeen iyo maalin taagan waddamadaase muxuu ka soo qabtaa?
Qodobkan lixaad oo uu ku sheegay inuu dowlad goboleedyada la samaysanayo xiriir wanaagsan sida Jubbaland iyo Galmudug waa arrin siyaasadeed quman oo weliba ammaan iyo waxgal u ah Khayre, hadduusan xiriir wanaagsan la sameynin miyuu la dagaali lahaa mise xiriirka ayuu u jari lahaa?
7: Qodobka 7aad wuxuu ku sheegay inuu dad taageersan dowladda ka shaqaalaysiiyey, hadduusan sidaa yeelin ma kuwo majo xaabiya oo ceeb u soo jiida ayuu shaqa geyn lahaa?
Qodobka 8aad wuxuu mar saddexaad u gefayay madaxweynaha, kuna celiyey in Khayre fashiliyay heshiisyo mucaaradka iyo Madaxweynaha dhex mari lahaa iyo dowlad goboleedyada, haddaba haddii Madaxweynuhu uusan xafiiskiisa war u hayn, dowladaha deriska ahna laga xigsaday oo uusan siyaasadooda la socon, shirarna lagaga fashiliyay, haddana wuxuu qodobkan ku qirey inuusan madaxweynuhu cidna la heshiin Karin iyadoon Khayre ogolaan, yaa dalka haddaba ka Madaxweyne ah?
Qodobka 9aad ilaa 13aad wuxuu aad ugu fogaaday arrimo aan dhab ahaantoodu jirin, wuxaana ka mid ah inuu dad shaqada ka eryey, inuu xisbi samaysanayo, inuu qalalaase keeni doono, inuu Madaxweynaha dhagrayo.
Ninka qoraalkan diyaariyey oo aad hannaanka qoraaleed ee Afka marka ugu horreysa ku liita ayaan haddana helin cid ka kaalmeysa ama ka tafatirta qodobbadan iska wada hor imanaya ee u badan calwasaad iyo qarow maalmeed tiiraanyeysan.
Isku soo wada duub oo waa baroortu orgiga ka weyne, ninkaasi wuxuu “dhagar” noogu sheegay in uu is sharaxo Kheyre oo Madaxweyne Farmaajo la tartamo, haddaba is weydiintu waxay tahay; ma Kheyre ayaa ugu horreeya Ra’iisalwasaare isla soo sharaxa Madaxweynihii ay wada shaqaynayeen mise waa wax hore usoo jirey ilaa iyo 1960kii.
Haddii uu jiro xeer dastuuri ah oo diidaya Khayre waa qaldan yahay ee hal qabto, haddii uusan jirina, weli Afkiisa kama haynee, hadduu doonayo waxaan qabaa in nin weliba kartidiisa iyo dadnimadiisa la gole yimaado kuna tartamo muxaafid iyo mucaaradba.
Previous articleDowlada Denmark oo ansixisay sharci cusub oo ka dhan ah soo galootiga
Next articleSAWIRRO: Madaxweyne Farmaajo oo la Kulmay Madaxda Wadamada Ciraaq, Talyaaniga & Sweden
Xog:Muxuu Mursal ka ogyahay warqadda xoghayaha joogtada ee ah in mooshinka uu buray?
SAWIRO:-Madaxweyne Xaaf oo kulamo ka bilaabay Muqdisho & Safiirka Dalka Ingiriiska oo maanta la kulmay
Xog & Warbixin: Sidee loo fuliyey Shantii Qarax ee maanta ka dhacay MUQDISHO ?
Wasiirka Waxbarashada Somaliya oo dhagax dhigay iskuulkii sare ee degmada Howlwadaag(Daawo Sawirada)
Wasiiro katirsan Xukuumada Soomaaliya oo aqbalay Codsiga uga yimid Madaxweyne Deni
Dowlada Somaliya oo Kudhawaaqaday In Xal Kama Dambeysa Lagagaarayo Khilaafkii Kadhextaagan Maamulka G/Hiiraan
Sargaal katirsan Booliiska Canada oo loo heesto dilka Muwaadin Soomaaliyeed
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya oo kulan la qaatay Boqorka Sacuudiga
Ciidamada Kenya Oo Xabsiga Dhigay Kudhawaad 200 Soomaali oo usocotay goob halis ku ah Naftooda